Faallo ku saabsan heshiiska ASWJ iyo DFKMG | Aaran News	Home
Sunday, February 28th, 2010 | Posted by aarannews Faallo ku saabsan heshiiska ASWJ iyo DFKMG
(1) In la fuliyo go’aanka shirkii IGAD ee 30kii Jeennaayo 2010.
(2) In isbeddel lagu sameyo Golaha Wasiirrada DFKMG.
(3) In la baabi’iyo ASWJ, kana mid noqoto DFKMG.
(4) In la aqoonsado, loogana mahadceliyo Dowladda Federaalka Ethiopia dadaalkeeda joogtada ah ee ay ugu jirto “Nabad” ka dhalinta Soomaliya.
(1) In xalka iyo maareynta talada iyo siyaasadda Soomaliya looga dambeeyo Dowladda Ethiopia.
(2) In Soomalidu mashquul ku ahaato Dowladnimo iyo guluf dhalanteed ah.
(3) In laga dhex abuuro kooxaha Soomalida khilaaf muujya damiir la’aan iyo garasho-xumo.
(4) In la abuuro dareen ah in Beesha Caalamka iyo Ethiopia ay qaaden taallaabo wax looga qabanayo dhibaatada Soomaliya si indhaha looga jeediyo barakaca iyo burburka ka dhashay fulinta Istratejiyada lagu dhaqaaqay laga soo bilaabo 2005.
Guuxa ka soo baxaya labada dhinac wuxuu muujinaya rajo-xumo. Koox ka mid ah ASWJ ee joogta Muqdishu waxay ku dhawaaqday inaysan qayb ka aheyn heshiiska, hase yeeshe ay ka mid yihiin DFKMG oo heshiiska dhinac ka ah. Koox kale waxay ku dhawaaqday dhismaha Dowlad Goboleed cusub. ASWJ waxay doorbideysa:
(1) Inaysan ku biirin DFKMG oo ay ahaato xoog iyo awood siyaasadeed oo gooni u taagan.
(2) In beesha caalamka toos u taagerto ASWJ.
(3) In ASWJ noqoto koox ka xoreysa dalka AL Shabab iyo Xizbul Islaam.
(1) In ASWJ la burburiyo, laga adkaado ama hoos timaado xukunka DFKMG.
(2) In Beesha Caalamka aysan si toos ah u taagerin ASWJ.
(3) In Al Shabab iyo Xizbul Islaam aan laga adkaan ilaa dhammadka waqtida DFKMG.
Jiritaanka ASWJ waxay ku eg tahay marka la qabto xafladda heshiiska inkastoo Dowladda Ethiopia ay mar hore ku boorisay Beesha Caalamka, DFKMG iyo ASWJ dhaqan-gelinta hesiiska. Wasaaradaha Dowladda waxaa loo qaybiyay darajooyin kala ah A,B, C, waxaana heshiisku tilmaamaya in muddo 30 maalmood ah lagu mideeyo DFKMG iyo ASWJ. Heshiisku ma qorayo shardi ah in Barlamaanka Dowladda Federaalka iyo Golaha Hoggaamiya ASWJ ansixiyaan ka hor dhaqan gelintiisa. Isla markaa, heshiisku ma qorayo in wax laga beddelo Axdiga KMG ah si loo qeexo kooxaha wadaagga ku ah DFKMG sida ARS-D, ASWJ, DFKMG-Abdullahi Yusuf iyo HI-M. Waxay su’aal ka taagan tahay in xubnaha Barlamaanka iyo Dowladda ka tirsan yihiin kuwo matalaya beelahooda ama ururrada ay xilalka ku qaateen.
1 Response for “Faallo ku saabsan heshiiska ASWJ iyo DFKMG”
roone says:	March 13, 2010 at 6:02 am	magaran waa uun dad ka halasii habaajiyo ninkan odaga ah ee maqaalka qorayoow hadaad wax qabada umadaan utareyso oo daacad nimo jjirto labada kooxba waa dad kaadii ee isku keen waad awoodaaye hadiikale dad duurcidla ha udirin ilaahoow adaa aweedee dalkaayna noonabadeey aamiin
Madaxwayne ku xigeenka Jubbaland:- Xasan Sheekh marka hore Muqdisho xal ha u heli markaasi ka dib haka hadlo Kismaayo
Afar ka mid ah Madaxweynayaasha Jubbaland oo sheegay inay midoobeen ka dib kulan Kismaayo ku dhexmaray
IGAD oo ka soo horjeesatay Madaxweynayaasha Jubbaland, dowladda Somaliyana ugu baaqday inay qabato shir looga hadlayo…
Guddoomiye Jawaari oo difaacay mooshinkii ka dhanka ahaa R/wasaare Saacid iyo Barlamanka oo la horgeynayo barnaamijka…
Madaxweyne Xasan Sheekh:- Muqdisho ayaa lagu qaban doonaa shirka Midowga Afrika ee…
Faahfaahino ka soo baxaya qarax khasaare u geystay ciidamada Itoobiya oo gudaha magaalada…